သတိနှင့်ဘဝ – The Only Way To Go!
မိတ်ဆွေ ဖြစ်ပြီလား လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တကယ်ရင်းနှီးပြီး မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုင်းပင်းရင်း ဘဝတွေကို အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်သွားတယ်။ဒါကို လူတိုင်းသိထားတယ် သို့သော် လက်တွေ့အသုံးချမှုနည်းတယ် ။ ဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဟန်ချက်ညီမှုကြောင့်လို့ ဆိုချင်မိပါတယ်။ ဥပမာ- ခက်ခဲကြမ်းတမ်း အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးတစ်ခုကို လူနှစ်ယောက်ခရီးသွားကြပါပြီတဲ့။ အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်အခက်အခဲတစ်ခုတွေ့လို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးညှိနှိုင်းညီညွတ်ခြင်းမရှိပဲ သူတစ်မျိုး၊ ငါတစ်မျိုးနဲ့ဆိုရင် ကြုံလာတဲ့ ပြဿနာအခက်အခဲကို ကောင်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲတွေအနက် တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတစ်ယောက်တည်းဖြေရှင်းလို့မရတာတွေ ရှိသလို၊ နှစ်ယောက်အားတောင်မှ သိပ်မလွယ်ချင်တာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အချိန်မှာ ညီညွတ်အားက တော်တော်လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်လမ်းတည်းသွားသူအချင်းချင်းညီညွတ်ပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက ဒီလိုပါ။ လူတစ်ယောက်မှာ ထိလို့ကိုင်လို့ရတဲ့ ရုပ်ဒြပ်နဲ့ ထိလို့ကိုင်လို့မရတဲ့ အာရုံခံနာမ်ဒြပ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ထိုနှစ်ခုကို အထက်က တင်ပြခဲ့တဲ့ ဘဝခရီးသွားနှစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘဝခရီးလမ်းမှာဖြေရှင်းစရာအခက်အခဲပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ … More မိတ်ဆွေ ဖြစ်ပြီလား
2 Comments မိတ်ဆွေ ဖြစ်ပြီလား
>ဘ၀ အပိုင္းအစ ဆိုသည္မွာ .. ေကာင္းနုိး.ရာရာ ႏွစ္သက္မွဳေလးမ်ားနဲ႔ မွတ္သားမွဳေလးေတြကို က်ေနာ္႔ရဲ႔ စာဖတ္သမားမွတ္စုမွ တင္ျပခ်င္ပါတယ္. . တစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဘ၀ဆိုတာေလးေတြကို သံုးႏွဳန္းျပရင္ ..သူတို႔ထင္တာက ဒါ စာၾကီးေပၾကီးစကားပဲ ဆိုျပီး မသိသလိုေနတတ္တယ္ . တစ္ခ်ိဳ႕ဘ၀ကို တစ္ကယ္ျဖတ္သန္းေနတဲ႔လူေတြက ဘ၀ဆိုတာေလးေတြကို ၾကားရင္ သူ႔တို႔ရဲ႕အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြကို ျပန္ေျပာခ်င္ေနၾကတယ္ . က်ေနာ္က အဲ႔ဒါမ်ိဳးေလးေတြကို နားေထာင္ခ်င္တယ္ အတုယူခ်င္တယ္ သူတို႔နဲ႔ေတြ႔ရင္ အဲ႔ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းေလ႔ရွိတယ္ … ဘ၀ဆိုေလသည္မွာ…………..ေမြးဖြားတယ္ . ၾကီးျပင္းတယ္ . ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားရတယ္ . ပူေဆြးရတယ္ .ေပ်ာ္ရႊင္ရတယ္ .ေက်နပ္မွဳရွိတယ္ .ခြဲခြာျခင္းရွိတယ္ . ေပါင္းစည္းျခင္းရွိတယ္. နူးည႔ံတဲ႔ေလေျပကို ရွဴရွိဳက္ခြင္႔ရွိတယ္ . သမုဒ္ျပင္ထဲ လက္ပစ္ကူးခြင္႔ရွိတယ္. နိမ္႔ၾကမွဳလည္းရွိတယ္ . … More >၄။ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အပိုင္းအစေလးမ်ား
Leaveacomment >၄။ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အပိုင္းအစေလးမ်ား